I-China Disposable defense mask fektri nabaphakeli | I-Sinnovation
Imaski enezakhi ezilahlayo enezakhi ezintathu zenziwe ngezendlalelo ezimbili zezindwangu ezingezona ezilukiwe kanye nephepha lokuhlunga.Imaskhi enezinto ezintathu ezilahlayo yenziwa ngezendlalelo ezimbili zendwangu yefayibha engalukiwe esetshenziselwa ukwelashwa, kanye nesendlalelo sokuhlunga kanye no-anti Indwangu -e-bacterium engaphezulu kwama-99% yengezwe maphakathi, efakwe insimbi yi-ultrasonic. Ibhuloho lekhaleni lakhiwe ngopende wepulasitiki olungemvelo, olungenayo noma iyiphi insimbi. Ifakwe umusi ovunyelwe futhi onethezekile.Ukuguquguquka kwe-BFE kuze kufike ku-99% kufanelekile kakhulu kumafektri kagesi; Ukulahlwa kwekhabhoni okulahliweyo kwenziwa ngamagremu angama-28 endwangu engalukwanga ebusweni, kanti ungqimba wokuqala wenziwa ngo-anti Iphepha lokuhlunga le-bacterium, elingahlunga futhi livikele ama-bacterium afinyelela ku-99%, ngaleyondlela lidlala indima yokulwa namagciwane futhi livikele ukulimala kwegciwane.I-ungqimba oluphakathi lwenziwe nge-carbon fiber ehlanganisiwe nendwangu ye-carbon eyenziwe isebenze, okuyi-adsorption entsha nokusebenziseka okuhle izinto zokwakha.
1. gqoka imaskhi yobuso ukugeza izandla ngaphambili
2. zombili izandla zibambe intambo, uhlangothi olumnyama mnyama (oluhlaza okwesibhakabhaka), (lumhlophe qhwa)
3. umbala ongashisi, imaski inolunye uhlangothi lwentambo (lukhuni oluncane) ekhaleni, ngokusho kwempumulo yakhe ifakwe ucingo bese idonsa isembozo somzimba wemaskhi phansi ngokuphelele, yenze imaski imboze ngokuphelele umlomo nekhala
Amahora angama-8 ajwayelekile ukufaka imaski elahliwe, ayikwazi ukusetshenziswa futhi
Imaski elahlekile kufanele igcinwe egumbini elingenawo umswakama ohlobene nodlula i-80%, amagesi angonakalisi kanye nomoya opholile omuhle ukuze uvikele ukushisa okuphezulu
Imaski elahliwayo ingagqokwa kuze kuphele amahora angama-8. Ngokuvamile, idinga ukushintshwa ngemuva kwamahora ayi-8. Ngaphezu kwalokho, imaski elahliweyo ayikwazi ukuhlanzwa futhi ngeke isasetshenziswa futhi ngemuva kokuhlanza. Ukutheleleka kwenoveli coronavirus nakho kusesigabeni esiphezulu sezehlakalo. Kuyadingeka ukubuyekeza imaski kanye emva kwamahora angama-2-2 ngemuva kokugqoka imaskhi. Ikakhulu abasebenzi bezokwelapha, badinga ukugqoka imaski engu-N95 futhi badinga ngisho namagogo. Abantu abavame ukuthintana namacala abasolwa noma abatholakala namacala okuxilonga badinga ukugqoka izingubo zokuvikela. Ukugqoka imaskhi, kufanele futhi sinake izindlela ezifanele. Ngaphambi kokugqoka imaskhi, kufanele siqale ngokuhlanza izandla zethu, bese sihlukanisa uhlangothi olubuyela emuva nolwaphambili lwamaski. Ngemuva kokugqoka imaskhi, singacindezela phansi ucingo lwensimbi ku-maski, silungise ukwakheka kocingo lwensimbi ngokuya ngobude bekhala lethu, bese sidiliza imaskhi ngokuphelele, ukuze sikwazi ukwahlukanisa igciwane langaphandle futhi sinciphise ukutheleleka Izinkinga.
Esedlule: Isikhwama sokufakwa kwemaskhi sokuzivikela se-mask
Olandelayo: Ibhuloho lekhala